Quiche nge salmon, i-broccoli kunye netshizi yebhokhwe | IBezzia
UMaria vazquez | 05/10/2021 10:00 | Isaladi kunye nemifuno, Pescado
E-Bezzia sithanda kakhulu iiQuichés. Ngaba Iitarati zelori Sibafumana njengenye indlela efanelekileyo yokuqalisa xa sineendwendwe, kodwa kunye nesona sidlo siphambili sokwabelana nangaluphi na usuku lweveki. Kwaye sizame oku isalmon, ibrokholi kunye netshizi yeyona siyithandayo.
Ukuzibuza yamkela iifilitha ezininzi, ke bagqibelele ukuba basebenzise ezi ntsalela sinazo efrijini. Kule meko, isalmon entsha, ibroccoli kunye netshizi yebhokhwe zezona zithako ziphambili. Ukongeza, silungiselele intlama ekhaya.
Inhlama ye-quiche Kulula kakhulu ukulungiselela kodwa ukuba awunalo ixesha lokuyenza okanye ukhetha enye indlela elula okanye ekhawulezayo, unokubheja kwindlela emfutshane yezorhwebo okanye intlama yenkuku. Asinakuthi iziphumo ziyafana kodwa zilungile ngokulinganayo.
I-150 g yomgubo wengqolowa
75g ibhotolo ebandayo
Isipuni esinye seoyile
1 ilike enqunqiweyo
I-1/2 i-anyanisi encinci, igalelwe
I-180 g. i-broccoli kwiifrets
80 g. itshizi egayiweyo
280 g. isalmon entsha ecoliweyo
Izilayi ezi-5 zeshizi yebhokhwe
190 ml. cream ukupheka
190 ml. ubisi lonke
Hlanganisa umgubo kunye nebhotela kwisitya ube ziityhubhu kwaye usebenze, nokuba kungxangxasi okanye ngezandla zakho, ucofa inhlama, de ufumane ukuhambelana kwesanti.
Después yongeza iqanda, ixesha longeze amacephe amabini amanzi. Hlanganisa njengoko kufuneka ukudibanisa izithako kunye nokwenza ibhola.
Nje ukuba uphumelele, faka intlama kwifriji kwaye mayihlale iyure.
Ngelixa, bilisa ibŕocoli imizuzu emi-4 kumanzi amaninzi anetyuwa. Emva kwexesha, cofa kakuhle kwaye ugcine.
Ke susa epanini ngecephe elingu-1 le-oyile yomnquma ilike kunye netswele kangangemizuzu emi-5.
Emva yongeza i-broccoli kunye negalikhi kwaye ndikhangele eminye imizuzu embalwa. Nje ukuba ugqibile, susa ipani kubushushu kwaye ugcine.
Ukuphelisa i-oveni ukuya kwi-180ºC.
Ukukhupha inhlama kunye nomgca wokujikeleza okungqukuva okungama-26 cm ububanzi okanye enye ye-36 × 13 enesiseko esisusekayo.
Ke chukumisa isiseko ngemfoloko, beka iphepha kwiphepha lesikhumba ngaphezulu kwaye ugcwalise iibhola zokubhaka okanye imifuno.
Bhaka isiseko Ngexesha lemizuzu engama-15.
Thatha ithuba lelo xesha abethe amaqanda ngekhilimu, ubisi kunye nentwana yetyuwa, ipepile kunye nenutmeg.
Emva kwemizuzu engama-15 uthathe ukungunda kwi-oveni kwaye ususe zombini iibhola okanye imifuno kunye nephepha.
Beka itshizi egreyithiweyo kwisiseko usasaze phezu kwawo umxube we-broccoli owugcinileyo, isalmon entsha kunye noshizi webhokhwe.
Ukugqiba uthele kumxube oxutywe.
Bhaka imizuzu engama-30 okanye kude kube yimiphetho yegolide. Kwaye xa sele yenziwe, susa ngundo ngononophelo.
Ncedisa isalmon, i-broccoli kunye netshizi yebhokhwe eshushu okanye eshushu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iresiphi » Pescado » Quiche nge salmon, broccoli kunye netshizi yebhokhwe
Fumanisa izixhobo zokubhaka kwiZara Home
Umona nomona kwesi sibini